DAAWO SAWIRADA” Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka oo kormeeray Xero lagu Tababaro Ciidamada oo ku Taalla Kismaayo, – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 13/12/2018 ] AKHRISO:- Dawlada Qatar iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis muhiim ah	Arimaha Bulshada
[ 13/12/2018 ] Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya oo sharci daro ku tilmaamay xariga Sheekh Mukhtar Roobow	Arimaha Bulshada
[ 13/12/2018 ] Shir looga hadlayo xariga Sheekh Mukhtar Roobow oo ka socda magaalada Muqdisho	Arimaha Bulshada
[ 13/12/2018 ] AKHRISO:- Jadwalka Doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo la shaaciyay	Wararka Soomaalia
[ 13/12/2018 ] AKHRISO:- Xildhibaano ka hadlay xariga Sheekh Mukhtar Roobow	Arimaha Bulshada
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRADA” Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka oo kormeeray Xero lagu Tababaro Ciidamada oo ku Taalla Kismaayo,
DAAWO SAWIRADA” Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka oo kormeeray Xero lagu Tababaro Ciidamada oo ku Taalla Kismaayo,
24/11/2015 Wararka Soomaalia 0
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Jeneraal Maxamed Aadan Axmed iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo ku sugan Magaalada kismaayo, ayaa maanta kormeer uu ugu kuur-galayay xaaladda ay ku nool yihiin ciidanka wuxuu ku tagay xeryaha ciidamada xoogga dalka ee duleedka Kismaayo,
Jeneraal Maxamed Aadan Axmed , taliyaha Ciidanka xoogga dalka oo la hadlayay ciidamada ku sugan Kismaayo ayaa kula dardaarmay inay noqdaan ciidan ka shaqeeya danaha shacabka, isla markaana ay illaaliya xaquuqda bani’daamka; maadaama ay nasiib u yeesheen inay noqdaan ciidamadii la isku dhafay ee ugu horreeyay.
“Waa inaad illaalisaan nafta, sharafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed, kana difaacdaan dalka cadowga oo ay ugu horreyso Al-shabaab,” ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga dalka.
Isagoo sii hadlayay ayuu intaas ku daray. “Hadda waxaan ka shaqayneynaa sidii dib loogu dhisi lahaa ciidamadii Qaranka oo loo sugi lahaa xuquuqda ay Qaranka ku leeyihiin si ay u gutaan waajibaadkooda Qaran. Waxaana idiin sheegayaa in aad nasiib u yeelateen in aad noqotaan ciidankii ugu horreeyay ee la isku dhafo.”
“Taliska xoogga dalka Somalia waxba dib uma dhiganayo si loo dhiso dhammaan qaybihii ciidamada xoogga dalka oo la doonayo inay ka yimaadaan dhammaan gobollada dalka oo dhan. Ciidanka waa la isku dhafayaa, waxaana laga qorayaa dalka oo dhan,” ayuu mar kale ku yiri hadalkiisa tliyaha ciidanka xoogga dalka.
Ugu dambeyntii, taliyaha iyo wafdigiisii oo ay ka mid ahaayeen saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubbooyinka ayaa kormeer ku tagay xerada akadeemiyada ee ku taalla duleedka Kismaayo iyo xeryihii ciidamada badda Somalia ee ku yaalla gudaha Kismaayo.
Taliyuhu ayaa wuxuu kormeerkiisa kusoo gaba-gabeeyay Dekadda weyn ee Kismaayo oo xilligii uu booqanayayay ka socotay shaqo maalmeedka caadiga ah ee dekedda.
DAAWO SAWIRADA: Gudoomiyaha ururka dhalinyarada Gobolka Hiiraan oo Booqasho ku Tagay degmooyinka Maxaas iyo Matabaan,
MUUQAAL+SAWIRO:Oday dhaqameed iyo Qurbo joog Sharuud ku Xiray dhismaha Maamulka Hiiraan iyo shabeellaha dhexe,